Review 13 Nước Tẩy Trang Cho Da Khô Được Tin Dùng Nhất | Kotexpro - Kotexpro
Review 13 Nước Tẩy Trang Cho Da Khô Được Tin Dùng Nhất | Kotexpro
Iimveliso zokususa i-Makeup zihlala zikholisa ukwenza ulusu lome kwaye zilahlekelwe ngumaleko we-oyile okhuselayo okhoyo eluswini. Ke ngoko, amantombazana eqela “lolusu olomileyo” kufuneka alumke ngokwenene ekukhetheni imveliso elungileyo kulusu lwabo. Ukuba usazabalaza ukukhetha, nazi ezona 13 zibalaseleyo zokususa izithambiso zolusu olomileyo namhlanje. Makhe siphonononge nge-365 entle ngoku!
Bona ngakumbi >>> Uphononongo oluneenkcukacha lwe-12 ezingcono zokususa izimonyo namhlanje
1 Makeup remover kwesikhumba esomileyo
1.1 1. I-Eucerin Pro Acne Solution I-Acne & Yenza Amanzi Acocekileyo
1.2 2. Avene Cleanance Micellar Water
1.3 3. Yves Rocher Anti Pollution + Detox Micellar Cleaning Water
1.4 4. I-Missha ekufuphi nesikhumba i-pH Ukulinganisa Amanzi okucoca
2 I-makeup remover yesikhumba esomileyo esibuthathaka
2.1 5. I-La Roche-Posay Micellar Water Ultra ye-Sensitive Skin
2.2 6. I-L’Oreal Micellar Amanzi 3-in-1 Iyahlaziya
2.3 7. Bioderma Sensibio H2O
2.4 8. Uhlobo olulula loKulusu Amanzi okucoca iMicellar
2.5 9. IGarnier Dry Skin Irritation Cleaning Water
2.6 10. I-Byphasse Micellar Yenza i-Remover Solution I-Sensivive, i-Omile kwaye i-Arrited Skin
3 I-makeup remover yesikhumba esomileyo sokudibanisa
3.1 11. I-Nivea Eqaqambileyo Eyongezelelweyo Yenza Icace I-Micellar Amanzi esikhumbeni esomileyo
3.2 12. Amanzi okucoca i-Evoluderm Micellar
3.3 13. Amanzi aCoca iTea eluhlaza engahlawulelwayo
Makeup remover kwesikhumba esomileyo
1. I-Eucerin Pro Acne Solution I-Acne & Yenza Amanzi Acocekileyo
Olu luphawu lwezithambiso oluvela eJamani olugxile kwiimveliso zonyango lwe-acne. Eyona nto ibalaseleyo ngumgca wemveliso ye-Pro Acne. Makeup remover kwesikhumba esomileyo I-Eucerin Pro Acne Solution inika amandla okususa i-makeup kunye ne-oyile engaphezulu ngaphakathi kwi-pores, ngaloo ndlela inceda ukukhupha ii-pores kunye nokunciphisa ukubunjwa kwe-acne.
Bona ngakumbi >>> I-10 ithengisa kakhulu i-makeup remover yolusu oluthanda amaqhakuva ngo-2021
I-Eucerin Pro Acne Solution I-acne kunye ne-Make Up Coco Amanzi (Umthombo: I-Intanethi)
Glycerin, Sodium Hyaluronate moisturize, ukunika amanzi ulusu oluthambileyo, olugudileyo.
I-Arginine inceda i-antibacterial kunye ne-anti-inflammatory, iyancipha i-acne.
Ikhusela i-acne ekuphuhliseni kwaye ithobisa ulusu oluxhaphakileyo.
Ifomula ityebile kukufuma kwaye ayinayo iparabens, utywala kunye neziqholo.
Imveliso ye-Benign efanelekileyo kubathengi bee-lens zoqhagamshelwano
Ixabiso lokubhekisela: 400,000 VND / 400ml
Bona ngakumbi >>> Top 12 makeup remover ulusu olubuthathaka olucetyiswa ngoogqirha besikhumba
2. Avene Cleanance Micellar Water
Ukuba nefomula ethambileyo yamanzi amaminerali endalo, i-Avene Cleanance Eau Micellaire Amanzi ifanele ukuba “ngumncedisi osebenzayo” wokugxotha ukungcola, ulusu olucocekileyo olubuthathaka. Imveliso ifanelekile ukusetyenziswa kwindawo yobuso kunye neliso.
Bona ngakumbi >>> Uphononongo lwemigca emi-4 yokususa i-Pond ecoca ulusu ngexabiso elifikelelekayo
Ukucoca i-Avene Micellar Water (Umthombo: i-Intanethi)
I-Mineral-rich Avene Thermal Spring Water ithambisa ulusu olucaphukisayo kwaye yondla ulusu.
I-Butylene Glycol ithambisa ulusu.
Ilungele zonke iintlobo zolusu kubandakanywa ulusu olubuthathaka kakhulu, alubangeli ukucaphuka okanye ukuhlaba kwamehlo.
Ifomula ikhuselekile kwaye ithambile, ayiyi kuhlaba amehlo.
Ukukwazi ukucoca ngobumnene, ngoko kulungele ukusetyenziswa kuphela ukususa i-makeup yendalo encinci.
Ixabiso lereferensi: 295,000 VND
Bona ngaphezulu >>> Imigca emi-4 ephezulu ye-benign elula yokususa izimonyo kuzo zonke iintlobo zolusu
3. Yves Rocher Anti Pollution + Detox Micellar Cleaning Water
I-Yves Rocher i-makeup remover yesikhumba esomileyo ibonelela ngokukwazi ukucoceka ngokunzulu, ukususa ulusu olufileyo kumphezulu wolusu kunye nokuthomalalisa ulusu lwamaqhakuva ngokugqithisileyo. Imveliso ikwanceda ulusu ukususa iileya zobumdaka eluswini kwaye inika ukukhanya okunempilo okusebenzayo.
Bona ngakumbi >>> Yintoni i-makeup remover? Iimveliso ezi-7 ezilungileyo kakhulu onokuthi uzame ngoku
Yves Rocher Anti Ungcoliseko + iDetox Micellar Coca Amanzi (Umthombo: Intanethi)
I-Glycerin, i-aloe vera gel extract, i-chamomile ixhasa ukuchasana nokudumba, ithambisa ulusu lwe-acne kunye nokuthambisa ulusu.
I-AHA / BHA (i-salicylic acid kunye ne-citric acid) ixhasa unyango lwe-acne kunye nokukhupha.
Iimveliso ezithathwe kwizithako zendalo zikhuselekile eluswini.
Imveliso ifanelekile kuzo zonke iintlobo zesikhumba.
Ukukwazi ukucoca okulungileyo.
ixabiso Reference 370,000 VND
4. I-Missha ekufuphi nesikhumba i-pH Ukulinganisa Amanzi okucoca
I-Missha ekufutshane nesikhumba i-pH Ukulinganisa ukuCoca Amanzi yimveliso yokususa izithambiso engancinci ulusu kodwa inika isakhono esisebenzayo sokucoca. Imveliso ayinikezeli nje ukuhlanjululwa okunzulu, kodwa iphinda ilinganise i-pH yesikhumba. Oku kunceda ukugcina ulusu lusempilweni kwaye alunamsindo.
I-Missha Kufuphi neLusu pH Ukulinganisa Amanzi aCocayo (Umthombo: I-Intanethi)
Amanzi eminerali, i-amino acid, iSaponin kunye nezinye izicatshulwa zezityalo.
I-pH kwi-5.0 ayibangeli isikhumba esomileyo.
Ifomula ekhuselekileyo engenawo amafutha amaminerali kunye neparabens.
Inokususa eyona “enkani” makeup.
Ixabiso lokubhekisela kwi-280,000 VND
I-makeup remover yesikhumba esomileyo esibuthathaka
5. I-La Roche-Posay Micellar Water Ultra ye-Sensitive Skin
Lo ngumgca isisusa sokuthambisa kwisikhumba esomileyo esibuthathaka ekungafanele uyihoye. Imveliso inokukunceda ukususa izimonyo ngokucocekileyo ngaphandle kokubangela ukomisa kwesikhumba. Yonke into malunga nalo mntwana ilungile kwaye ekuphela kwenqaku lokususa lo mntwana kukuba iqulethe i-flavoring kunye nentwana ye-BHT yokulondoloza. Nangona kunjalo, ngokubanzi, ezi khompawundi zinezinga eliphantsi kwaye zikhuselekile kakhulu eluswini.
ILa Roche-Posay Micellar Water Ultra yolusu olubuthathaka (Umthombo: i-Intanethi)
La Roche-Posay Mineral Water, Glycerin.
Isakhono esilungileyo sokucoca, kubandakanywa ne-makeup engenamanzi.
Ibonelela ngomswakama kwaye inciphisa ukukhuhlana xa ucoca, i-anti-oxidant, inceda ukukhusela ulusu kwiindawo ezingcolileyo.
Ilungele ukususa izimonyo ebusweni, amehlo kunye nemilebe.
Ixabiso lokubhekisela: 435,000 VND
6. I-L’Oreal Micellar Amanzi 3-in-1 Iyahlaziya
I-L’Oreal 3 kwi-1 ye-Micellar yokuCoca Amanzi inokukunceda ukuba ususe izimonyo ngokulula ngaphandle kokushiya ulusu luziva lomile ngenxa yetekhnoloji yokucoca amanzi eMicellar. Oku kuthandwa ngabasetyhini abaninzi.
I-L’Oreal Micellar Amanzi 3-in-1 Iyahlaziya (Umthombo: I-Intanethi)
I-Glycerin kunye ne-Isohexadecane inceda ukugcina ukulingana kokufuma okufanelekileyo kwesikhumba.
Ikhono lokucoca imveliso liphezulu.
Ulwakhiwo Ayinamafutha emva kokususa i-makeup.
Ilungele ulusu oludibeneyo, ulusu olunamafutha kunye nolusu olubuthathaka
Ixabiso lereferensi: 169,000 VND
Ebizwa ngokuba yimveliso yokususa i-makeup “yesizwe”, i-Bioderma Sébium H2O ihlala ikwi-TOP 1 yeemveliso. i-makeup remover yesikhumba esinamafutha ngcono namhlanje. Imveliso inefomula ethambileyo, engacaphukiyo kunye “noxinzelelo-zinziso” amandla okucoca ukunceda ukususa iileya zeoyile, ukungcola kunye ne-makeup eluswini.
I-Bioderma Sensibio H2O (Umthombo: I-Intanethi)
I-cucumber extract, i-oxidizing mussels kunye nePropylene Glycol ayibangeli ukomisa kwesikhumba xa isetyenziswa.
Ifomula ikhuselekile, ilungile, ifanelekile kuzo zonke iintlobo zesikhumba, kubandakanywa nesikhumba esibucayi.
Ixabiso lereferensi: 150,000 – 400,000 VND ngokuxhomekeke kubungakanani.
8. Uhlobo olulula loKulusu Amanzi okucoca iMicellar
Lula luphawu lwezithambiso oludumileyo oluvela e-UK kwaye luphantsi kwe-Unilever. I-brand “igama litsho konke”, lihlala lijolise ekuthambekeni nasekulungeni kuzo zonke iimveliso zalo. Uhlobo olulula lweLusu lokuCoca iMicellar Amanzi aya kuba lolona khetho lufanelekileyo kolona lusu “olunzima”.
Uhlobo olulula lokuCoca iMicellar emanzini (Umthombo: i-Intanethi)
I-Nicinamide, i-chamomile extract inceda ukuzola ulusu, ukunciphisa ukuveliswa kwe-oyile egqithisileyo kunye nokucutha iipores.
Ivithamin C iyaqaqambisa kwaye ilungelelanise ithoni yesikhumba
I-Panthenol (i-Pro vitamin B5), i-Glycerin inceda ukuthambisa nokubuyisela ulusu.
Akukho ziqholo ezenziweyo okanye imibala, akukho khemikhali zirhabaxa, akukho tywala, akukho parabens.
Ilungele zonke iintlobo zolusu, ngakumbi ulusu olubuthathaka.
Amandla okucoca athambileyo alungele ukususwa kwe-makeup yemihla ngemihla.
Imveliso ayisomisi ulusu.
Ixabiso lokubhekisela kwi-150,000 VND
9. IGarnier Dry Skin Irritation Cleaning Water
Garnier I-SkinActive Micellar Ukucoca Ioli yamanzi – ifakwe kumgca wokukhupha izimonyo kwisikhumba esomileyo ongafanele ungayihoyi. Imveliso idityaniswe namanzi kunye ne-makeup remover ukubonelela ngesakhono esibalaseleyo sokuthambisa. Ngaphezu koko, umaleko we-oyile uya kukunceda ukuba ususe ngokufanelekileyo ukungcola ngaphandle kokukhuhla kakhulu ulusu.
I-Garnier SkinActive Micellar yokuCoca ioyile yaManzi-ifakwe (Umthombo: i-Intanethi)
IGlycerin, iHexylene Glycol ithambisa ulusu
Ikhono lokucoca liphezulu kuneendlela eziqhelekileyo zokususa izimonyo.
Moisturize kakuhle kwaye unciphise ukukhuhlana nolusu.
Iqulethe AKUKHO imibala, iziqhumiso, iiparabens kunye neoyile yeminerali.
Ilungele ulusu olomileyo olubuthathaka.
Ixabiso lokubhekisela: 140,000 VND
10. I-Byphasse Micellar Yenza i-Remover Solution I-Sensivive, i-Omile kwaye i-Arrited Skin
I-Byphasse Micellar Yenza i-Remover Solution I-Sensivive, Eyomileyo kunye ne-Irritated Skin yi-makeup remover ethandwa kakhulu kwi-makeup remover eyomileyo, ulusu olunomsindo namhlanje.
I-Byphasse Micellar Make Up Remover (Umthombo: I-Intanethi)
Isiqalelo: I-Glycerin, iPropylene Glycol kunye nePanthenol inceda ukuthambisa kunye nokuthobisa ulusu.
Ukukwazi ukucoca izimonyo kulungile.
Imveliso ifanelekile kwesikhumba esinamafutha, i-acne, isikhumba esomileyo kunye nesikhumba esibucayi, ayibangeli ukucaphuka kwesikhumba.
Ifomula ikhuselekile kwaye ayinabungozi.
Ixabiso lereferensi: 150,000 VND
I-makeup remover yesikhumba esomileyo sokudibanisa
11. I-Nivea Eqaqambileyo Eyongezelelweyo Yenza Icace I-Micellar Amanzi esikhumbeni esomileyo
I-Nivea Eyongezelelekileyo Eqaqambileyo Yenza Icace I-Micellar Amanzi sisisusi se-makeup esinamandla okucoca ngokunzulu kodwa asibangeli ukoma kunye nokucaphuka kolusu. Imveliso inexabiso “lezoqoqosho” kakhulu, ke i-Dep 365 ngokuqinisekileyo awufuni kuphoswa yimveliso ngale “super bargain” deal, akunjalo?
I-Nivea Eyongezelelekileyo Ekhazimlayo Yenza Acace Amanzi eMicellar (Umthombo: I-Intanethi)
I-Glycerin, i-Oli yembewu yeediliya, i-Citic Acid (AHA), i-Propylene Glycol iphucula ukuhanjiswa kwesikhumba.
Itekhnoloji ye-Micellar Oxygen Boost inceda ukucoceka okunzulu kunye nokuvuselela imveliso ye-collagen yolusu.
Ukufuma kunye nokucocwa okunzulu.
Susa i-makeup ye-WaterProof.
Imveliso ifanelekile kwesikhumba esomileyo kunye nokudibanisa.
Imveliso ayinamafutha ngokukhawuleza emva kokusetyenziswa.
ixabiso Reference 142,000 VND
12. Amanzi okucoca i-Evoluderm Micellar
I-Evoluderm Micellar yokuCoca Amanzi iya kuba lukhetho olufanelekileyo kwabo bangathandi iziqholo okanye iziqhumiso ezinamandla kakhulu kwiimveliso zakho zokhathalelo lwesikhumba.
Amanzi okucoca i-Evoluderm Micellar (Umthombo: i-Intanethi)
Amanzi eminerali, isicatshulwa segrapefruit esine-antioxidant esine-antioxidant.
IMixen sisicoci solusu.
Imveliso inika ukukwazi ukucocwa ngobumnene ukwenza ulusu lucoceke kwaye lome.
Izithako azinayo ioli, utywala kunye neparaben.
Ilungele zonke iintlobo zolusu, kuquka ulusu olubuthathaka.
Ixabiso lereferensi: 140,000 VND
13. Amanzi aCoca iTea eluhlaza engahlawulelwayo
Ayiboneleli nje ngokucocwa ngoko nangoko, i-Innisfree Green Tea yokuCoca Amanzi yenye yazo i-makeup remover yesikhumba esomileyo iqhakuva ethandwa kakhulu phakathi kwabasetyhini namhlanje.
Amanzi aCoca iTea eluhlaza engahlawulelwayo (Umthombo: I-Intanethi)
Imveliso iqulethe iintlobo ze-16 ze-Amino Acid, i-3, i-5 ngamaxesha angaphezulu kwezondlo zokondla ulusu, ukubuyisela isakhiwo sesikhumba se-acne.
Ukulinganisa i-pH kwaye uqinise ii-pores enkosi kwisicatshulwa seti yendalo eluhlaza.
Ivumba elithambileyo, lendalo lamagqabi eti aluhlaza limnandi kakhulu.
Ubume obuxinene kancinci bongeza ukumanzisa kolusu.
Ixabiso lereferensi: 340,000 VND/300ml
Ngemigca ye-13 yokususa i-makeup yesikhumba esomileyo ngasentla, i-365 enhle inethemba lokuba unokukhetha ngokulula imveliso efanelekileyo yolusu lwakho. Nceda ulandele amanye amanqaku e-Enhle 365 ngolwazi olungakumbi lobuhle!
READ Review nước tẩy trang Chacott Cleansing Water: tẩy sạch nhưng vẫn nhẹ dịu cho làn da | Kotexpro
Previous: TOP 9 viên uống thơm cơ thể tốt nhất, giúp bạn “tỏa hương” cả ngày dài không cần dùng nước hoa | Kotexpro
Next: Cách đăng nhập tik tok Trung Quốc qua 5 bước nhanh và dễ | Kotexpro